के Instagram र सामाजिक मीडिया विलुप्त यात्रा छ? | सडकको लागि एक युगल
नोभेम्बर 8, 2018 /4टिप्पणिहरु
हामी चिचेन इट्जामा थियौं जब यो मलाई मारा। ट्रेसी र म सधैँ Yucatan प्रायद्वीप भ्रमण गर्न चाहन्थे, जहाँ राम्रो म्यानन सभ्यताको एक पल्ट एक ठूलो र शक्तिशाली साम्राज्य सिर्जना भयो, र त्यहाँ हामी थिए। हामी नजिकैको खडा भयौं किनकि हामी नामको मुख्य पिरामिड गर्न सक्छौं एल Castillo (या अधिक ठीक देखि, कुकुलान को पिरामिड), र संरचना को रूप मा, आकार, साइज, र बस को रूप मा लिया शक्ति जस्तै हामी सकेनौं। एकछिन पछि मैले सोधेँ, "तिमीहरुसँग भेट्न सकिनँ।"
व्यक्ति पछि व्यक्ति, यस प्रतीक बीकन वरिपरि समूह पछि समूह र होइन एक व्यक्ति वास्तवमा यो हेर्दै थियो। एक समूहले क्लासिक "क्याप्चर-ए-फोटो-इन-इन-मध्य-एयर-जब -'एम.-जम्पिंग" लिने प्रयास गरेपछि, उनीहरूको आईफोनलाई रेखाबाट तल सार्न नदिईसम्मसम्म उनीहरूले उनीहरूको आफ्नै रन्डिङ को इन्स्टाग्राम क्लासिक बन्यो।
त्यसो भए, तर अझै पिरामिडको नजिक धेरै साथीले मलाई प्रेमीलाई सुनेका थिए कि उनीहरूलाई फोटो खिचेका थिए। "ठीक छ, एकै प्रयास गरौं ... तपाईँका औंलाहरू जस्तै यो यो समय ... "म पनि सन्दर्भ गर्दै थिए भन्ने कुरा निश्चित छैन। पछिल्ला महान मेयन बल कोर्ट मा त्यस दिन पछि छोटा समूहहरु मा मिलयो - ऊब लग रहेको छ। यो हामी जस्तै योद्धाहरु को मन्दिर मा टहलने को रूप मा छ, जसको समयमा मैले कुनै को भन्न को लागी सुना, "मैले सोचे कि यो थियो ठूलो, "उनको साथीलाई सोध्नु अघि उनी त्यो खान तयार थिए।
"छ यो हामी के होईनौं? "म सम्झन सक्दिनँ, तर मैले पनि यो अडिगलाई भने। ट्रेसी र मैले पछि दोहोरो लामो वार्तालाप गरेका थिए, र यो प्रश्न भनेको मेरो दिमागमा आवधिक रूपमा त्यस दिन देखि नै हो - सामाजिक सञ्जाल र थप विशेष गरी, इन्स्टाग्राम, बर्बाद यात्रा?
अब, म मतलब छैन "बर्बाद" को रूप मा एक ट्रूवाद को रूप मा प्रदान को रूप मा। बरु, हामीले हाम्रो सामाजिक अचम्मको माध्यमबाट हरेक दशकको लागि हाम्रो सामाजिक चलनको माध्यमबाट निरन्तर बमबारी गरिरहनु भएको हाम्रो कुनै पनि आश्चर्य, वालगायतको बारेमा केहि गुमाएका छौं?
यसबाहेक, के हामी सिधै सामाजिक, सामाजिक, र नैतिक दुविधामा सामाजिक सामाजिक परिणामको सामना गरिरहेका छौं?
हामी Instagram को बारे मा मिश्रित भावनाहरु छ।
साथीहरूको बीचमा अचानक फोटो साझेदारीको लागि मनोरञ्जनयोग्य प्लेटफर्मको रूपमा सुरु भयो किनकि आत्म-सम्बन्धको राक्षसहरूको लागि एक खुसी उन्माद हो। सबैजना, यो लाग्छ जस्तो लाग्छ कि, या त ज्ञात वा इन्स्टाग्राममा बन्ने को कगारमा।
सत्य हो, प्लेटफर्म आफैलाई जस्तै यात्रा ब्लगर्सको लागि एक आवश्यक बुराई हो। ब्रान्डहरू, साझेदारहरू, र तपाईँका श्रोताहरूले तपाईंलाई इन्स्टाग्राममा उपस्थित हुन अपेक्षा गर्दछन्, र त्यसलाई असफलता स्वीकार्न कसैलाई असफल बनाउन। इन्स्टाग्रामको साथ एक लाख चीजहरू गलत छन् - असंगत एल्गोरिथ्मबाट लिएर जुन लगातार साथीहरूको पृष्ठहरू र तिनीहरूका पृष्ठहरूको सट्टामा ब्रान्डहरूलाई औसत व्यक्तिलाई फिल्टर गर्दछ, उनीहरूले रोचक खोजी गर्छन्, आवश्यक निम्न खेलकुद व्यवस्थापन र निम्न-फ्याक्टेड तथ्याङ्कहरू बढ्दैछन्। माछाहरू सजिलै पखाल्न वा उचाइमा बेवास्ता गर्न सकिन्छ। यद्यपि, सबैभन्दा ठूलो दोष भनेको इन्स्टाग्रामले औसत यात्रीलाई गर्न सक्दछ।
के तपाईलाई थाहा छ कि अधिक से अधिक मान्छे - विशेष रूप देखि मिलेनियलियल्स र जेनरेन्स जेर्स - वास्तव मा उनीहरूको छुट छान्नुहोस् ठाउँको Instagrammability मा आधारित? वास्तवमा, लगभग 40% 33 भन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरू जहाँ भ्रमण गर्न उनीहरूको छनोटमा प्रमुख कारकको रूपमा इन्फ्राग्राम लोकप्रियता उल्लेख गर्दछ।
तिनीहरूले Inst Vacram मा कुन प्रकारका दृश्यहरू प्राप्त गर्न सक्छन् उनीहरूको छुट्टै आधारमा आधार राख्छन्।
अब, यो असन्तुष्ट हुनेछ मेरो भन्न चाहनुको लागि कि सोशल मिडियामा संलग्नता सबै गलत छ - मेरो अर्थ हो, हामी ब्ल्यागर्स यात्रा गरिरहेका छौ। सामग्री सिर्जना गर्न ठूलो छ, केही च्यानलको माध्यमबाट रिहाई (इन्स्टाग्राम वा अन्यथा), र सामग्री प्राप्त हुन्छ लोकप्रियता स्तर द्वारा सुन्नुहोस्।
ठिक छ यदि फोकस विषय को सम्मान मा छ। हामी सधैं धेरै सावधान छौं कि हामी इन्स्टाग्राममा राखेका ठाउँलाई हामी भ्रमण गरिरहेका ठाउँको सम्मान गर्दछौं, र त्यहाँ एक प्रतिष्ठान, एक डिश, एक स्थानीय व्यक्ति, वा केहि चीज जुन एक स्थानको अर्थ हो। हाम्रो इन्स्टाग्राम फिड, तपाइँ भेट्टाउनुहुन्छ, धेरै फोटोहरूमा हाम्रो वास्तविक उपस्थितिको कमी छ।
त्यो कारणको लागि हो।
Instagram को साथ समस्या छ जब अद्भुत स्थानहरु जस्तै Yucatan को कोनोट्स, एथेन्स मा पन्तहेन र एप्रोपोलिस एक मॉडल फोटो हरु को लागि मात्र पृष्ठभूमि मा कम हुन्छ। जब हामी यात्रा गर्छौं, हामी सामग्री सिर्जना गर्न चाहन्छौं जसले निरीक्षण गर्दछ तपाईं यात्रा गर्न - सामग्री होइन जुन आत्म-उग्रगिजिङ हो।
दरअसल, भ्रमणको संसारमा सही प्रकारको सोशल मिडिया सामग्री यात्रीको बारेमा होइन - यो गन्तव्यको बारेमा हो.
इन्स्टाग्रामले एक निश्चित स्तर विच्छेदको समर्थन गर्दछ जुन वास्तवमा अन्वेषण र यात्राको सामना गर्दछ अर्थ, र यो दुःखलाग्दो यात्रीहरूलाई बदलिँदै छ। मैले फ्लुङ प्रभावकारी तथ्याङ्कका थुप्रै उदाहरणहरू देखेको छु - अनुयायीहरू, मनपर्नेहरू र टिप्पणीहरू - दिएका इन्टाग्राम पृष्ठको लोकप्रियता बढाउन। वास्तवमा, मैले देखेको एक ठूलो यात्रा पृष्ठ हप्ता बिना वृद्धि हुन्छ, केवल एक दिनमा 5k अनुयायीहरू बढाउनका लागि। कुनै वृद्धिको धेरै हप्ता पछि, र अन्तमा केही स्पष्ट छ ड्रप गर्नुहोस् 2k द्वारा अनुयायी गणनामा, खाता फेरि एक 5k जम्पियो।
के यो साँच्चिकै त्यो सोच्न योग्य छ कि यी सबै मनपर्ने र टिप्पणीहरू पनि गलत छन्? यदि यो मामला हो भने, के ब्रांडहरू वास्तवमा को लागि भुक्तानी गर्दै छन्, कुनै पनि तरिकाले? के तिनीहरूले महामारीको बारेमा चिन्तित छन्? प्रभावकारीहरू सजग छन् कि यो तपाईंको संलग्नता तथ्याङ्क अनुसार भुक्तानी गर्दा यो निरपेक्ष परिभाषा हो चोरी?
जब औसत यात्री यो गर्छ, तिनीहरूले हाम्रो मध्यम र यात्रा को अनुभव सस्ता अनौठो रणनीतिहरू प्रयोग गरेर सूट पछ्याउँदछ। मलाई यकीन छ कि तपाईंले ती सबै ल्याउँदै हुनुहुन्छ "उत्कृष्ट तस्वीर ब्रो! 100!"टिप्पणीहरू जुन हाम्रो र तपाईंको फिड भरिएको छ। यसले हामीलाई पोक गर्न चाहन्छ, फ्रिज हुन।
सबै बेला, तपाईं प्लेटफर्ममा वैध गतिविधि प्रयोग गरेर आफ्नो पृष्ठमा संलग्नता चलाउन र चलाउन चलाउनुहुन्छ, तपाईले माथिल्लो स्थानको माथिल्लो ओभरलेक्सिभ फोटोहरूसँग बाहिरिनु भएको छ - यस बीचको समयमा तपाईंको कपाल बाहिर हटाउन चाहानुहुन्छ। म आफैलाई यति धेरै सोचिरहेको छु, "गम्भीरतापूर्वक, यदि मैले केटीको एक प्रेमीको अर्को तस्विर हेरेको थिएँ (जो सधैं अफ-फ्रेम हो) हात र झरनामा, म अनुहारमा आफैलाई पंच गर्न जाँदैछु!"
यो अपरिहार्य - अपमानजनक लाग्दछ। एकपटक जब तपाई वास्तवमा एउटा गन्तब्यमा जानुहुन्छ र फोटोशॉपमा पक्कै पनि शाब्दिक रूपमा चित्रित नगरेपनि हेर्नुहोस्, बिना नकली ताराहरू आकाशमा घुम्न नसक्ने, र तपाईका सबै पर्यटकहरू जुन तपाई जस्तै झिकेर तपाईका साथ नकली फोटोहरु मार्फत गए इन्स्टाग्राम (तिनीहरू प्राय: फोटोशट बाहिरियो), तपाई आफैलाई सोच्नुहुन्छ, "मेड - यो वास्तवमा प्रभावशाली छैन।"
यात्राको हाम्रो अनुभव कम छ किनभने हामी वास्तविक अनुभवको लागि असक्षम हुनुभएको छ, यसको सट्टा संसारमा "प्रायः" यात्रा गर्नुको साटो छैन एक वास्तविक अनुभव।
अब, त्यहाँ धेरै संख्यामा समस्याहरू छन्, पछिल्लो दशकमा पहिलो स्थानमा रहेको धेरै ठाउँहरू, पर्यटनमा असीम वृद्धि देख्न सकिन्छ, अक्सर प्रायः के कपडा नष्ट बनाउछ सुरु गर्न अनुभव। Yucatan प्रायद्वीप जस्तै स्थानहरू, माचू पिचू, र आइसल्याण्ड पर्यटकहरूलाई मृत्युमा हराउँदैछ जसले त्यहाँ स्थानको शक्ति महसुस गर्न सक्दैन, यसको इतिहासमा प्रकट गर्न वा अद्भुत व्यञ्जन पत्ता लगाउन।
तिनीहरू त्यहाँ छन् लाइक.
अब, भर्खरै, हामी यो समस्याको भाग हो। यात्रा ब्लगर्सको रूपमा, तपाईंले इन्स्टाग्राममा हाम्रो फोटोहरू मध्ये प्रत्येक पटक यसलाई असर पार्छ, र हामी जुन स्थानमा पुग्छौं र केहि स्थानहरू जुन धेरै ट्राफिकेशन संग संघर्ष गर्ने त्यस्ता ठाउँहरू छन्। एक स्थान ल्याउन हामी त्यहाँ संस्कृतिको लागि त्यहाँ छौं तिमीलाई, र यो गन्तव्यको बारेमा बनाउनुहोस् (तपाईं ध्यान दिनुहुन्छ कि हाम्रो तस्वीरहरु मध्ये केहि मा वास्तव मा हामी मा यिनी हुन्छन्), हामी जान्दछौं कि हामी पूर्ण भएनौं।
ओभर टुरिज्मजस्ता ठाउँहरू बिग्रिएका छन् भेनिस र बार्सिलोना उनीहरूको सुन्दर शहरहरूमा पर्यटनको प्रभावबारे मुखिया भएको छ - जहाँ निरन्तर प्रवाहले घर घुम्न थाल्यो र मूल्यहरु भाडा, खाद्य मूल्यहरु, र निरन्तर उत्साहको कारण स्थानीयहरुको लागि जीवनशैली घट्यो। आइसल्याण्डमा पर्यटनमा ठूलो वृद्धि इन्फ्रास्ट्रक्चरमा एक अविश्वसनीय तनाव राखिएको छ, साथै स्थानीयहरूको लागि जीवन बिताउने लागतमा ठूलो वृद्धि भएको थियो।
तथापि अधिक अधिवेशनको साथ, तथापि, हामीसँग हाम्रो रगतको फोहोर फोहोरमा पुग्छ।
तपाईंले यो देख्नुभयो।
हामीले यो देख्यौं।
एक3विश्व विश्व देशमा केहि स्टाइलिशली-क्लड "इन्फिसेन्सर" थिच्दै गर्दा तपाईंको प्रायोजक पिच गर्दै र अर्कोपटक तपाईँ "युद्ध" गर्नुभएका गाँउको शैंसी शहरमा किन "यो लुगा लगाउ" गर्नुपर्दछ। यो बिरामी छ, र इन्टाग्राम र सोशल मिडिया दुवै भन्दा पूर्ण छन्।
त्यहाँ यात्रीको रूपमा सामाजिक जिम्मेवारी हो, चाहे तपाइँसँग भ्वाईस छ, चाहे तपाईंसँग ब्लग छैन, र सोशल मिडियामा तपाईंको विनाशता को बाहेक।
यात्रीको रूपमा पहिलो लक्ष्य हाम्रो अन्वेषणमा हिप्पोकुकुक हुनु हो। अधिकतम गैर नाक (लैटिनमा: "पहिलो - कुनै हानि नगर्नुहोस्"), शपथ भन्छन्। एक यात्रीको रूपमा र अधिक पक्कै पनि कुकुर वा दर्शकको स्तरको रूपमा कसैले, जिम्मेवारीको वजन तपाईंमा छ कहिल्यै अवस्था बिग्रेको छ। सँधै तपाईलाई यो भन्दा राम्रो ठाँउ छोड्नुहोस्।
तपाईं एक शाकाहारी हुनुहुन्छ? त्यो एकदम ठुलो कुरा हो। यो एक सम्माननीय तरीका हो - म चाहन्छु कि म अनुशासन थियो। तथापि, हुनसक्छ कि तपाई अर्जेंटीना को एक सानो गाँउ लाई तपाइँको अर्को Instagram photoshoot को लागि यात्रा गर्न को लागी आवश्यकता छैन, स्थानीय पैवेलर्स को बारे मा यदि उनि कुनै किसान-देखि-मेज रेस्टुरेन्ट को बारे मा पूछ रहे हो। अर्कोतर्फ - तपाईं एक स्टिक-प्रेमी हुनुहुन्छ? धेरै राम्रो - राम्रो स्टिक भन्दा राम्रो केहि पनि छैन। यद्यपि, हुनसक्छ कि तपाई दक्षिणी भारतमा हुनुहुन्छ भने फाईल बाईपास गर्न चाहानुहुन्छ जहाँ गायहरू पवित्र मानिन्छ।
त्यो हानि गरिरहेको छ। त्यो टोन-बियर भएको छ। स्थानीय संस्कृतिको आदर गर्न सजिलो छ, र यसको निर्णय गर्नु अघि तपाईंको स्थानमा नैतिक विश्वासहरूसँग मेल खान्छ वा होइन, र तपाईलाई यात्रा गर्नको लागि यो ठाउँ हो भने दृढतापूर्वक विचार गर्नुहोस्।
विचारशील हुनुहोस्। जहाँ तपाईं यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, को परम्परा र विश्वास बारेमा एकदम चिन्नुहोस्, र ती सबै रुचिहरु को सम्मान गर्न को लागी सबै केहि गर्न को लागी सबै मान्छे को लागि जोरदार रहन को लागी सबै केहि गर्न को लागि।
सोशल मिडियाको भूमिका
यससंग यसो भनिएको छ, सोशल मिडियाले महत्त्वपूर्ण महत्वको उपकरण बनीरहेको छ। हाम्रो यात्राहरू हामीले ब्लगबाट प्राप्त प्रेरणाको कारण सुरू गरे जस्तै, हाम्रो जस्तै। हामी केहि महान सामग्री को द्वारा स्थानांतरित गरेको थियो कि यात्री को दिल को पुरानो थियो, र यो वास्तव मा wanderlust को भावना को मतलब छ कि चाहते हो।
सामाजिक मिडिया राम्रो लागी एक उपकरण हुन सक्छ। नरक, इन्स्टाग्राम राम्रो लागी एक उपकरण हुन सक्छ। अहिल्यै आफैंलाई उड्ने को लागी लहरहरु को तल थोरै-थोरै मानिसहरू सामाजिक र क्लासिक समस्याका बारेमा जागरूकता ल्याउन खोज्दैछन्, मान्छेहरूले उनीहरूको प्लेटफर्म प्रयोग गर्न खोज्दैछन्, कहिलेकाहीँ कतिपय, कहिलेकाहीँ मनमा एकान्त परिवर्तन गर्न। यदि यो हो भने राखिराख्नुहोस्।
मलाई लाग्छ कि पेंगलुम सधैँ "फिर्ता आउँछ"। मलाई लाग्छ यो सुरू गर्न पनि छ। म अधिक से अधिक प्रभावशालीहरु को इंस्टाग्राम मा कम प्रभाव डाल जान्छ, या आफ्नो पद्धति को बदलन को रूप मा बदल सकते हो या सोशल मीडिया को अलग या पूर्ण ईमानदारी को शैली मा शपथ। कुनै सेकेन्ड छैन, कुनै फलाम छैन, सँधै वास्तविक। मानिसहरू बुलशट बिरामी हुन लागेका छन, फ्रिज हुन।
के त्यो गरिरहनुहोस्। संसारलाई तपाईलाई चाहिन्छ। पर्यटन चाहिन्छ।
सोशल मिडिया अझै पनि ठूलो काम गर्न सक्छ। पर्यटन पैसाले ठाउँहरूमा ल्याउन सक्छ यसको आवश्यकता छ। वास्तवमा, आइसल्याण्ड अघि पूर्ण रूपमा पर्यटन द्वारा ओभरराइड गर्नु अघि, यो 2008 मा आर्थिक रूपमा रिकभरी गर्न सक्ने क्षमतामा एक ठूलो कारक थियो। पर्यटनले जनावरहरूको अधिकार, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, वा स्रोतहरूको कमीको विषयहरूमा जागरूकता ल्याउन सक्छ।
पर्यटन पनि हुन सक्छ समाधान ती समस्याहरू, र सोशल मिडियाले त्यो ठूलो कारक हुन सक्छ।
यसको अतिरिक्त, सोशल मिडिया अझै पनि प्रेरित गर्न सक्छ - र अझै पनि गर्छ। तथापि, सोशल मिडियाको भविष्य यात्राको सन्दर्भमा के हो? के हामी साँच्चै उल्लेखनीय स्थानहरूको हाम्रो प्रशंसा गुमाउनेछौं किनकि हामीले फेसबुकमा 1,000 समयको लिप-स्टाइल गरिएको संस्करण देखेको छौँ? म आशा गर्दैनु।
यद्यपि, प्रभावकारीहरूको रूपमा हाम्रो जिम्मेवारी हो। हामीले तपाईंलाई स्थान, मानिसहरूको बारेमा र तपाईलाई आफ्नै अनुभव खोज्न प्रेरणा देखाउन सच्चाइ दिनु पर्छ।
मेरो ब्लगरहरू मतलब छैन - म सबैलाई मतलब छ। के गर्न we, यात्रीहरु, सुनिश्चित गर्न को लागी कि सामाजिक मीडिया एक उपकरण राम्रो छ को लागि प्रयोग गरिन्छ, र त्यो यात्रा केहि उद्देश्य छ कि प्रेरणा को लागि कार्य गर्दछ, जागरूकता ल्याउन, र हाम्रो परिप्रेक्ष्य को विस्तार को विस्तार गर्न को लागि?
पहिलो, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, कुनै हानि गर्न.
जब तपाईं यात्रा गर्नुहुन्छ, त्यत्ति आदर गर्नुहोला। ठूलो हुनुहोस्। आफैलाई ध्यान नदिनुहोस्। गलत कारणको लागि खडा नगर्नुहोस्। जागरूकताको भावना छ।
केही गर। एक सानो कचौरा छान्नुहोस्, लुगा लगाएर पनि, र कचरामा राख्नुहोस्। विदेशी देशहरूमा मानिसहरूका लागि ढोका खोल्नुहोस् - केवल, केहि। रातो कालीन तपाईंको लागि लुगा लगाउन अपेक्षा नगर्ने, तर बरु सेवाको अवसर खोज्न, कति फरक छ।
कसरी भन्न सकिन्छ कृपया, धन्यवाद, माफ गर्नुहोस्, हो, र no मेजबान भाषामा जहाँ तपाइँ यात्रा गर्नुहुन्छ।
चेकलिस्टको सन्दर्भमा यात्राको विचार नगर्नुहोस्। यो प्रतियोगिता होइन।
स्थानीय परम्परा र परम्पराहरूको बारेमा सजग रहनुहोस्। तपाईंले चीजहरूमा सहभागी हुनुहुन्न जुन तपाईले मात्र सहमत हुनुहुन्न किनभने स्थानीयहरूले (जस्तै धार्मिक विश्वास, आहार प्राथमिकताहरू, आदि ...), तर ती परम्पराहरू अभ्यास गर्नेहरूलाई अपमानित नगर्नुहोस्।
सँधै सम्झना - गन्तव्य पहिलो, तपाईं दोस्रो मानिसहरू, ठाउँहरू, वा तपाईंको गन्तव्यको परामर्श अघि आफूलाई राख्नुहोस्।
तस्विर लिनुहोस् - तिनीहरू सर्वश्रेष्ठ स्मारकहरू तपाईं प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, र तिनीहरू निःशुल्क छन्! Instagram मा उनीहरूलाई साझेदारी गर्नुहोस्, तर तपाईले चाहानुहुन्छ साझा गर्नुहोस् - तर यो सबै ईमानदारीको स्तरको साथ गर्नुहोस्।
आउनुहोस् हामीलाई थाहा भएमा हामीले केहि चीजहरू छोडेका छौं, र तपाइँका विचारहरू तलका टिप्पणीहरूमा छन्। धन्यवाद केटा - प्रेरित यात्रा यात्रा!
श्रेणी: मानवअधिकार, परम्परा, यात्रा ब्लगिङ टैग: फेसबुक, आइसल्याण्ड, इन्स्टाग्राम, पेरु, सामाजिक संजाल, पर्यटन
← 2019 मा अधिक यात्रा कसरी गर्ने
कहाँ भियना मा रहन →
4 टिप्पणिहरु "के Instagram र सोशल मिडिया विलुप्त यात्रा?"
यो जानकारीपूर्ण लेखको लागि धन्यवाद। म लामो समयसम्म एकदम सही महसुस गरिरहेको छु। मैले तपाईंको सल्लाहलाई विशेष गरी मनपर्यो: "चेकलिस्टको सन्दर्भमा यात्राको विचार नगर्नुहोस्। यो प्रतिस्पर्धा होइन। "यो देखिन्छ कि यात्रा एक प्रकारको प्रतिस्पर्धा बन्न भएको छ जसमा सहभागीहरू (ब्लगरहरू मात्र होइन) धेरै ठाउँहरू भेट्न प्रतिस्पर्धा गर्छन्।
र हे प्रिय! मलाई कुनै जानकारी छैन कि त्यहाँ "Instagrammability" को आधारमा आफ्नो यात्रा स्थल छनोट गर्ने व्यक्तिहरू छन्। केही वर्ष पहिले नै कसैले कसैलाई इन्स्टाग्राम थाहा थियो ...
नोभेम्बर 11, 2018
धन्यवाद जोआना - खुसी लाग्यो तपाईंले यो मजा लिनुभयो। मलाई कहिलेकाहीँ हामी बिर्सन्छौं कि यात्राको सम्पूर्ण बिन्दुमा व्यापक अनुभव छ, तथ्याङ्कहरु acc संकलन गर्दैन
मलाई दिनहरू सम्झँदा मान्छेहरूले भ्रमण गर्थे र ती ठाउँहरूको आनन्द उठाउँथे। सामाजिक सञ्जाल अहिले हाम्रो जीवनको धेरै असर गर्छ तर यो समयको चिन्ह हो।
म व्यक्तिगत रूपमा इन्स्टाग्राममा धेरै हुनुहुन्न तर मेरो सामग्रीको रूपमा फोटो र भिडीयोहरू प्रयोग गरी मैले निर्माणको मूल्य बुझ्दछु। मानिसहरू भिजुअल छन् र सधै चमकदार, उज्यालो छविहरूमा आकर्षित हुनेछन्।
मैले देखेको छु कि तपाईं इन्टिग्रामरहरू जोगाउन सक्नुहुनेछ2टाढाको शहरहरूमा गएर पिटेको बाटो बन्द। तपाई कम पर्यटक र क्यामेराको लागि प्रस्तुत व्यक्ति भेट्टाउनुहुनेछ।
साघ ओह ठीक छ, म सँधै राम्रो ओलम्पिक दिन सम्झन्छु जब मैले मेरो डिस्पोजेबल पुरानो स्कुल कोडक क्यामेरासँग तस्बिर खिचे। आह सम्झनाहरू!
सहमत - अझै पनि यो सबै भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण बनाउँछ कि तपाइँ वास्तवमा एक स्थानको लोकप्रियताको बावजूद हेर्न चाहानुहुन्छ। 🙂